Ulufihla njani unxibelelwano kwi-Instagram ukuze bangandiboni kwi-Intanethi | Iindaba zeGajethi
Ukuhleba sisiseko se-Instagram, kutheni sizikhohlisa… Asinamdla wokwabelana kwangoko ngoko sikwenzayo, kuba la ngamabali e-Instagram kunye neefoto, kodwa nokuba sikwazi ukubona okwenziwa ngabahlobo bethu kwaye kungenjalo abahlobo. Ngoku i-Instagram inesimboli yesimo ebonisa ichaphaza eliluhlaza xa umsebenzisi ekwi-intanethi okanye umyalezo obonisa ukuba wayegqibele nini ukusebenzisa i-intanethi. KwiActualidad Gadget sibuya nezifundo, sikufundisa indlela yokufihla unxibelelwano kwi-Instagram ukuze bangandiboni kwi-Intanethi.
Eli nqaku litsha lesalathiso esiluhlaza se-Instagram lixutywe kwimpikiswano njenge "kwi-intanethi" I-WhatsApp okanye ukucofa kabini okuluhlaza kwempikiswano, kodwa sineendaba ezimnandi, oku kuya kusebenza kwaye uya kuba nakho ukukhangela i-Instagram njengesiqhelo phantse ngokungaziwayo, ngaphandle kokuba uxelele abanye ukuba ukwi-Intanethi usebenzisa i-Instagram. Ukwenza oku kufuneka siye kuphela kuseto lwesicelo, nokuba kukwi-Android okanye kwi-iOS, yiya kwicandelo labucala nokhuseleko kwaye ukhethe ukhetho Bonisa imeko yomsebenzi. Kwiinguqulelo ezininzi oku kubonisiwe njenge Bonisa imeko yomsebenzi, kuba i-Instagram ayikandisi ngokupheleleyo eli nqaku okwangoku.
Nje ukuba siwuyeke lo msebenzi, awusayi kuphinda uboniswe ngechaphaza eliluhlaza ukuba sikwi-intanethi. Kwaye akukho myalezo uza kuvela obonisa ukuba loluphi olona nxibelelwano lwethu lokugqibela kunxibelelwano lwasentlalweni oludumileyo. Ewe ngokunjalo, njengoko kusenzeka kuWhatsApp, ukuba siyalufihla ulwazi ngobume be-Intanethi, ngekhe sikwazi ukubona ulwazi lwabanye, ke kuya kufuneka ulinganise ukuba kufanelekile okanye akunjalo. Yindlela elula yokuphelisa ukuhleba kwi-Instagram, akunjalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungalufihla njani unxibelelwano kwi-Instagram ukuze bangandiboni kwi-Intanethi